Izindaba - Isitshalo sikadizili esiphathwayo somhlathi womhlathi sithunyelwe ePhilippines
Umshini Wokugxoba Amatshe
I-Gold Washing Plant
Ama-crushers amatshe ahambayo ayimishini yokuchoboza amatshe egibele ithrekhi noma i-trailer egxunyekwe nge-trailer ehamba kalula phakathi naphakathi kwamasayithi okukhiqiza. Asetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni okuhlanganisiwe, ekusetshenzisweni kabusha, nasezindaweni zezimayini. Ama-crushers angamaselula angangena esikhundleni sezinhlelo ezimile zokuchoboza, okunciphisa isidingo sokudonsa futhi ngaleyo ndlela kunciphise izindleko zokusebenza.
Ekuqaleni kuka-2021, sathola umbuzo kukhasimende lethu elivamile lasePhilippines. Udinga ukuchoboza itshe lentaba libe izingxenye zokwakha. Umthamo wakhe odingekayo ungamathani angama-30-40 ngehora, usayizi wokufaka ongaba ngu-200mm futhi usayizi wokugcina wokuphuma ube ngaphansi kuka-30mm. Futhi udinga i-crusher ingasuswa isuka endaweni eyodwa iye kwenye.
Ngakho-ke ngemva kwezingxoxo ezihlukene, simenzela imboni yeselula ye-dizeli exutshwa imihlathi. Lesi sitshalo sihlanganisa ukwesekwa kwe-trailer ephathwayo, i-feeder vibrating, i-gaw crusher, i-belt conveyor. Futhi ngenxa yokuthi indawo esezintabeni ayinawo ugesi, ngakho-ke sihlomisa umshini wokugaya umhlathi ngenjini yedizili kanye nejeneretha kanye ne-vibrating feeder kanye ne-conveyor inikwa amandla yi-generator ukuze isebenze.
Ukucaciswa kweplanti yeselula ye-jaw crusher imi kanje:
Imodeli Yento Ubukhulu bosayizi wokufaka/mm Usayizi wokukhipha/mm Amandla/Umthamo we-HP(t/h) Isisindo/ithani
Isiphakeli esidlidlizayo VF500x2700 400 / 1.5KW 40-70 1.1
I-crusher yomhlathi PE300×500 250 0-25 30HP 25-50 5.9
Isihambisi sebhande B500x5.5m 400 / 3 30-40 0.85
I-trailer dimension 5.5×1.2×1.1m, 1.8 ton enamasondo nemilenze emine yokusekela lapho i-crusher isebenza.
Ngemva kokuphothula ukukhiqiza, imboni ye-crusher ephathwayo yahlukaniswa, ukuze ikwazi ukulayishwa kalula esitsheni esingama-40ft. Abasebenzi bethu bakhipha i-feeder edlidlizayo, bese i-crusher plant yafakwa esitsheni kahle, bese i-feeder yalayishwa futhi ngemva kwalokho.
Ngemva kokufika, impendulo yekhasimende muhle. Ngemuva kokusebenza kokuhlolwa, isitshalo se-crusher sisetshenziswa ngokuphelele. Futhi ukusebenza okusebenzayo kuzinzile futhi itshe lichotshozwa libe ngosayizi oyifunayo. Injini kadizili isiza kakhulu ekunikezeni amandla umshini wokugaya imihlathi futhi igweme izinkinga zokungabi nagesi.
Isikhathi sokuthumela: 25-06-21